Ambany maso tsy hita ny an’ny tena… | NewsMada
Ambany maso tsy hita ny an’ny tena…
Voavelively sy voalevilevy fatratra ny mpanohitra tato ho ato: fototry ny fidinana an-dalambe mahatonga korontana, fahantrana, fihemorana… Amin’izany, lehibe tsy meloka na tsy mba diso ny mpitondra. Ny teo aloha sy ny hafa hatrany no fototr’izao olana sy tsy fanjarian’ny raharaham-pirenena izao. Eny, na ny fahapotehan’ny fiainam-bahoaka isan’andro vaky amin’izao aza.
Noho ny nataon’ny mpitondra teo aloha sy ny hafa na ny mpanohitra avokoa no mahatonga izany. Eo ny tsy fandriampahalemana ankehitriny, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fandrobana tany amin’ny kolikoly avo lenta, ny fitavanan’ny vahiny ny harem-pirenena tantely afa-drakotra… Ny tsirairay no mandinika: inona loatra no mahatonga izany rehetra izany, amin’izao?
Ny tsy fanarahan-dalana, ny tsy fahafehezana ny raharaha avela ho gaboraraka, ny famelana ny vahiny hitavana harem-pirenena, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny fivarotan-tanindrazana… Aiza no tena misy an’izany? Na ny tena mpanao azy… Izany no hoe manao ambany maso tsy hita ny akaiky sy manodidina ny tena?
Tsy aiza ny takatra mihinana ny valala fa ao ihany, na ny vano mitsaingoka ny sahona. Misy ny tsinay homana aty, ary ao ny minia manamaimbo tena… Tsy misy olon-kotahafina intsony amin’ny fanarahan-dalana, fanaovana ny marina, fandehanana amin’ny fangaraharana… Ny toky, fitaka; fa any atao no hita. Haharesy lahatra ny hafa hiova ve raha ny tena aza manao ny atao ihany?
Ny atao, mahatarika… Tena arakaraka izay lazaina ve ny atao sy ny zava-misy? Izay no mahatonga ny fiainam-bahoaka tsy misy fiovana, vao mainka miharatsy andro aman’alina aza. Misy hatrany ny fitsikerana sy fanomezan-tsiny ny mpitondra: tsy mahomby, manao kobaka am-bava… Mila fiovana sy fanovana ifotony. Tsy mahita vahoaka tsinona, fa na ny tenany aza tsy hita.
Mbola misy mino sy ho azo amin’izany ve? Mitondra voninkazo fa tsy voankazo ny fitaka, hoy ny ohabolana afrikanina izay.